कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) सङ्क्रमणको असर र जोखिमले मानिसको दैनिक जीवन नै कठिन अवस्थामा धकेलेको छ । दैनिक जीवनका गतिविधि चलायमान नभएसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि धक्का लागेको छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो रहला र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्नुपर्ला ? लगायत समसामयिक विषयमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
← मध्यपूर्वमा दुईदेखि तीन लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउँदै
“बाफ लिएँ, कागती र बेसारपानी पिएँ, कोरोनालाई परास्त गरेँ” →
१ आश्विन २०७७, बिहीबार October 28, 2020 शुचि खबर	0